Garsoorayaasha Soomaaliya & Sudan oo la shaaciyay
Updated About:262 days ago 0
Xiriirka kubadda cagta Afrika ee CAF ayaa ku dhawaaqay garsoorayaasha dhex dhexaadin doona lugta kowaad ee ciyaaro ka tirsan isreebreebka tartanka dhalinyarada da’doodu ka yartahay 17-ka sano ee Qaarada Africa.
Lugta kowaad ciyaarta ay ciyaari doonaan xulalka 17 sano jirka ka yar ee Soomaaliya iyo Sudan ayaa waxey ka dhici doontaa Khartuum oo ah xarunta Sudan 21-ka bishan halka lugta labaadna lagu ciyaari doono Jabuuti oo ah guriga ku meel gaarka ah ee Soomaalida.
Ciyaartaas waxaa xeer ilaaliye ka noqon doona khabiir u dhashay Kenya oo la yiraah Maxamed Cumar Abuubakar, sida lagu sheegay warka ka soo baxay guddiga garsoorka CAF.
Qoraalka CAF waxaa lagu sheegay in garsoorayaasha ciyaarta ay kala yihiin Aadan Cabdi Jamaal dhexda halka calan wadayaashu ay kala yihiin 1d- Xasan Yaciin Cige 2d-Maxamuud Ciil tire Cabdullaahi oo dhamaantood u dhashay Jabuuti.
Xasan Cige wuxuu ka mid yahay calan wadayaasha ugu fiican bariga iyo bartamaha Africa waana nin da’yar oo mustaqbal fiican ku leh garsoorka. ninka 4d waxaa lagu sheegay Aadan Axmed oo u dhashay Sudan.
Shaafici Muxuyadiin Abuukar